Country rap Country အဆိုရှင် Brad Paiseley နှင့် U cool J သည် သီချင်း Justified & Ancient တို့က ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်(What the Fuck is Going On?) တွင် ပါဝင်သည်။ ထူးခြားချက်မှာ American Country ဂီတအဆိုရှင် Tammy Wynette က The White Room တွင် သီဆိုထားသည်။ ၂၀၀၀တွင် rapper Tow Down သည် Country Rap Tune ဖြန့်ချီခဲ့သည်။
ဟဲဗီးမက်တယ်လ် ဂီတ ၁၉၆၈ တွင် heavy metal သည် စတင်၍ ညီညွတ်ကြသည်။ ဇန်နဝါရီ တွင် San Francisco တီးဝိုင်း Blue Cheer သည် သူတို့၏ album "Vincebus Eruptum" တွင် Eddie Cochran ၏ "Summertime Blues" ကို cover ပြန်ဆိုထားသည်။ သုံးသပ်သူများသည် ပထမဆုံး heavy metal recording ဟုဆိုသည်။ ထိုကာလအတွင်းမှာ Steppen wolf သည် "Born to Be Wild" ပါဝင်သော self-titled debut album ထွက်လာခဲ့သည်။ ဇူလိုင်အတွင်းတွင် Jeff Beck Group ၏ "Truth" album ထွက်လာပြီး ဆူညံသံများသက်သက်ဖြင့် ဖန်တီးထားပြီး metal မျိုးဆက်သစ်များအတွက် breaking ground ဖြစ်သည်။ The Beatles ၏ "White" album ထွက်လာပြီး "Helter Skelter" သီချင်းပါဝင်သည်။ တီးဝိုင်း၏သီချင်းများထဲတွင် လေးလံပြင်းထန်သော သီချင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဒီဇင်ဘာလထဲတွင် the pretty things ၏ rock opera S.F.Sorrow ထွက်လာခဲ့ပြီး "Old Man Going" နှင့် "I see You" ကဲ့သို့ proto heavy metal သီချင်းမျိုးဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဝမ်းပိစ် ဖြင့်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရပြန်သည်။ CP9 ကိစ္စတွင် Enies Lobby အမည်ရှိ ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးများဆိုင်ရာ တရားရုံးတည်ရှိရာ မြို့တစ်ခုလုံးကို ဖျက်ဆီးခဲ့သောကြောင့် လူဖီအပါအဝင် ကောက်ရိုးဦးထုပ် ပင်လယ်ဓါးပြတစ်ဖွဲ့လုံး ဆုကြေးငွေဖမ်း၀ရမ်းထုတ်ခြင်းခဲ့ရရာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ လူဖီသည် မူလ ဖမ်းမိ၀ရမ်းငွေ ဘီလီ သန်းတစ်ရာမှ သန်းသုံးရာသို့လည်းကောင်း ၊ ဇော်ရိုးသည် ဘီလီးသန်းတစ်ရာနှစ်ဆယ်သို့လည်းကောင်း ၊ ဥဆောပု သည် ဘီလီ လေးဆယ့်ငါးသန်းသို့လည်းကောင်း ၊ နာမိသည် ဘီလီ ဆယ်ခြောက်သန်းသို့လည်းကောင်း ၊ ဆန်ဂျီသည် ဘီလီ သန်းခြောက်ဆယ်သို့လည်းကောင်း ၊ နီကိုရော်ဘင်သည် ဘီလီ သန်းရှစ်ဆယ်သို့ လည်းကောင်း ၊ ဖရမ်ကီသည် ဘီလီ လေးဆယ့်ငါးသန်းသို့လည်းကောင်း အသီးသီးမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဆုငွေမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ကောက်ရိုးဦးထုပ် ပင်လယ်ဓါးပြအဖွဲ့သည် ရေတပ်အင်အားစုရဲ့ကြောက်ရွံမှု ၊ ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းများရဲ့အာရုံစိုက်မှု ၊ အခြားသောပင်လယ်ဓါးပြများရဲ့လေးစားမှုကိုခံလာရပြီး အဆိုပါ ဆုငွေများကိုမက်မောပြီးလိုက်လံလုပ်ကြံသူများလည်းများပြားလာသည်။ Water7Arc အထိသူတို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး တရားဝင် သင်္ဘောကတော့ "Going Merry" (ゴーイング・メリー号 Gōingu Merī-gō?,) ဖြစ်ပြီး Enies Lobby Arc အပြီးမှာတော "Thousand Sunny" (サウザンドサニー号 Sauzando Sanī-gō?) လို့ခေါ်တဲ့ သင်္ဘောအသစ်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Straw Hat Pirates မှာ အဖွဲ့ဝင် (၉) ဦးရှိပြီး သူတို့အားလုံးရဲ့ ဆုကြေးစုစုပေါင်းဟာတော့ billi f800,000,050 ရှိပါတယ်
Pop punk ၁၉၉၈ အစောပိုင်းတွင် punk revival စီးပွားရေးအရ ပြန်လည်ရှင်သန်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကြာရှည်မခံခဲ့ပေ။ Eve6သည် သူတို့၏ self-titled album ကို RCA Records တွင် ဧပြီလတွင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ billboard Heatseekers တွင် နံပါတ်တစ်နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ Billboard 200 တွင်နံပါတ်၃၃နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ album သည် ကြီးမားစွာအောင်မြင်ခဲ့ပြီး "Leech", "Open Road Song" နှင့် "Inside Out" တို့စသော သီချင်းများ ပေါကဖွားခဲ့သည်။ ဇွန်လတွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းမှ Home Grown တီးဝိုင်းသည် သူတို့၏ Geffen record တွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် act Your Age album ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သီချင်းစာရင်းတွင် ပထမဆုံး album ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၈ Billboard Heatseekers တွင် နံပါတ်၂၄ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သီချင်းသည် Half Baked ဟာသရုပ်ရှင်တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ Homegrown (၁၉၉၈) ရုပ်ရှင်တွင်လည်းပါဝင်ခဲ့သည်။ ဇွန်လတွင် MxPx တီးဝိုင်းသည် A&M Record တွင် Slowly Going the Way of the Buffalo (studio album) ကို ဖြန့်ချီခဲ့ပြီး Billboard 200 တွင် ၉၉နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Unwritten Law တီးဝိုင်းသည် သူတို့၏ self-titled Lp သည် Billboard Heatseekers (၁၉၉၈) တွင် နံပါတ်၁၆ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထူးခြားသည့်သီချင်းမှာ Cailin ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၈ အောက်တိုဘာတွင် Zebrahead တီးဝိုင်းသည် သူတို့၏ "Waste of mind" album